सन्दर्भः 30 तारिक विमल पहाड नआउनेः विमल र गिरीले बारम्बार ढाँटिरहेका छन् -विनय – खबरम्यागजिन
HomeBreaking Newsसन्दर्भः 30 तारिक विमल पहाड नआउनेः विमल र गिरीले बारम्बार ढाँटिरहेका छन् -विनय
सन्दर्भः 30 तारिक विमल पहाड नआउनेः विमल र गिरीले बारम्बार ढाँटिरहेका छन् -विनय
October 29, 2017 खबरम्यागजिन प्रतिनिधि Breaking News, दार्जीलिङ, मुख्य समाचार 0
दार्जीलिङः ‘30 अक्टोबरको दिन गोजमुमो अध्यक्ष विमल गुरूङ पहाड़का जनताअघि आउने खुब चर्चा चलिरहेको थियो, तर 30 अक्टोबरअघिनै गोजमुमो महासचिव रोशन गिरीले एक प्रेस बयान जारी गरेर गुरूङलाई जनतासमक्ष नआउने अपील गरेका छन्, यो केवल नाटकवाजी मात्रै हो,’ जिटीए प्रमुख विनय तामाङले आज भने।
उनले भनेअनुसार यसअघि पनि रोशन गिरी र गुरूङले यसरीनै प्रेस विज्ञप्ति जारी गरेर त्रिपक्षीय वार्ता हुन्छ भन्दै 104 दिनसम्म चलेको पहाड़ बन्द खोलेको आरोप लगाए।
‘अहिलेसम्म पनि त्रिपक्षीय वार्ता भएको छैन। अहिले पनि त्रिपक्षीय वार्तानै भन्दै रोशन गिरीले गोजमुमो अध्यक्ष विमल गुरूङलाई 30 अक्टोबरको दिन जनताअघि नआउनु भन्दै ढाँटिरहेका छन्,’ तामाङले भने, ‘हामी पनि अलग राज्य गोर्खाल्यान्डबारे त्रिपक्षीय वार्ता होस् भन्ने पक्षमा छौं। गोर्खाल्यान्डको लागि त्रिपक्षीय वार्ता हुनैपर्छ। यसैले केन्द्र सरकारले शीघ्र गोर्खाल्यान्ड राज्य गठनको लागि वार्ता गर्नुपर्छ।’
विमल र गिरी किन लुकी लुकी हिँड्छन?
केन्द्र सरकारले त्रिपक्षीय वार्तामा विमल गुरूङ र विनय तामाङ दुवै गुटलाई राख्ने हल्ला चलिरहेको छ। यस सम्बन्धमा बोल्दै तामाङले सरकारले पठाउने निमन्त्रणा हेरेर मात्र प्रतिक्रिया दिने बताए।
‘यदि केन्द्र सरकारले यसो गर्छ भने केन्द्र सरकारले पठाउने निमन्त्रणा पत्र हेरेर निर्णय लिइनेछ,’ उनले भने। केही दिनअघि गोर्खाल्यान्ड राष्ट्रिय समितिका संयोजक डा. मुनिष तामाङको टोलीले केन्द्रिय गृहमन्त्री राजनाथ सिंहसित भेट गर्दा केन्द्रले त्रिपक्षीय वार्ता गर्ने जानकारी प्रदान गरिएको थियो। तर उक्त वार्ताको मितिबारे कुनै निश्चित छैन। ‘यदि केन्द्र सरकारले गोर्खाल्यान्डबारे वार्ता गर्छ भने गोजमुमो अध्यक्ष विमल गुरूङ, महासचिव रोशन गिरी आदि किन लुकिलुकी बस्छन्? के यसरी पनि वार्तामा भाग लिन सकिन्छ?,’ तामाङले भने।
छड्के भ्रमणः गल्ती भेटे कार्वाही
जीटीए प्रमुखका रूपमा तामाङले निकट भविष्यमा पनि विभिन्न विभागहरूमा छड़के भ्रमण गर्ने बताए। उनले केही दिनअघि दार्जीलिङ जिल्ला अस्पतालको छड़्के भ्रमण गरिएको बताउँदै त्यस समय अस्पतालमा कैयौं अनियमितता भेटिएको पनि जानकारी गराए।
यसरीनै आगामी दिनमा अन्य विभागमा हुने छड्के भ्रमणको क्रममा यस्ता अनियमितता भेटिए सम्बन्धित अधिकारीवर्ग विरूद्ध कार्वाही गर्ने पनि चेताउनी दिए।
‘हामीले 25 अक्टोबरको दिन जीटीएको कार्यभार सम्हालेपछि 10 अक्टोबरमा दार्जीलिङका मुख्य स्वास्थ्य अधिकारी, जिल्ला अस्पताल प्रमुख, डाक्टर, नर्स आदिसित जीटीएको मुख्यालय लालकोठीमानै एक बैठक गरेका थियौं अनि कुनै पनि समय अस्पतालमा छड्के भ्रमण गरिने बताएका थियौं,’ तामाङले भने, ‘त्यसैअनुसार, 10 अक्टोबरको दिन जिल्ला अस्पतालको भ्रमण गरेका थियौं, तर त्यस समय मुख्य स्वास्थ्य अधिकारी अनुपस्थित थिए भने अस्पतालमा डाक्टर, नर्सहरूको पनि कमी भेटिएको थियो। यसैले अब शीघ्रै यस विरूद्ध शीर्ष अधिकारीसमक्ष उजुरी गरिनेछ।’
विनय-अनितका नाममा धम्की दिँदै पैसा असुल गर्नेहररू विरुद्ध पुलिसमा उजुरी गरिने